Gbasara Anyị - ULLER
Mkpuru obi FREERIDER
Emebere ya na maka ndị hụrụ FREERIDE. Ngwaahịa nka na-arụ ọrụ dị elu maka ndị skiers nwere ahụmahụ bụ ndị chọrọ ngwaahịa na-arụ ọrụ kachasị mma na ọnọdụ ọ bụla ma ọ bụ ihe achọrọ nke ala.
Anyị nwere mmasị n'ugwu ahụ
Ajụla onwe gị maka ya gbasara Anyị; jụọ onwe gị nke ọma onye ị bụ na ebe ahụ… anyị ga-anọ. Ma ọ bụ ya Uller bụ otu ndị dị ka gị mejupụtara: ndị hụrụ freeride, nke ugwu, nke snow n'ụdị ya niile na nke ikuku dị ọcha. Anyị na-ebu ụzọ chepụta ngwaahịa anyị n'onwe anyị. Ee e, ọ bụghị n'ihi ọdịmma onwe onye. Anyị na-eme ya n'ihi na anyị na-achọ nkasi obi na ọkaibe nke anyị ga-enweta nke mbụ. A sị ka e kwuwe, nke ahụ bụ ihe ịmalite ọrụ bụ maka ya.
Anyị na-ebute aha anyị na Spain site na Scandinavia, otu n'ime ókèala kachasị mma na omenala oyi kachasị mma, kpọmkwem site na Norway, ebe okwu ahụ. Uller n’ebe ahụ ka ọ na-akpọ aha Chineke nke oge oyi. N'ezie, anyị aghọwo ndị mbụ 100% Spanish oyi ngwa ngwa ụlọ ọrụ, ndị a ngwa bụ Adịchaghị nke na-achọ ịnye gị elele kachasị mma iji megharia n'ụzọ zuru oke n'usoro uda gị na usoro gị. N'agbanyeghị ọkwa gị, anyị chọrọ iso gị na njem niile anyị maara na ọ dị nso na akụkụ nke ndụ gị.
Anyị bụ ndị egwuregwu, nwere mmasị na ndụ
Arụmọrụ nke ezigbo
Emepụtara iji mezuo ihe ndị na-achọsi ike nke ọnọdụ FREERIDE nwere ezigbo ihe na ogo dị elu nke na-eme ka arụmọrụ dị elu n'ọnọdụ kacha njọ. Anyị na-anwale ngwaahịa anyị niile n'okpuru ọkwa nrụgide kachasị elu iji hụ na ha zara dị ka anyị tụrụ anya ha.
adịchaghị mma karịa ihe niile
Kedu otu anyị ga-esi jikwaa kwenye ịdị mma na ngwaahịa anyị? Na mgbakwunye na inwe otu ndị ọkachamara na-emepụta ihe, anyị na-anwale ha na ndị ọkachamara na-eme egwuregwu na-enyere anyị aka ịghọta omume ha na nzaghachi maka ọnọdụ dị oke egwu, oge anyị na-atụ anya ịrụ ọrụ kachasị n'aka ha. Nke nta nke nta, anyị jisiri ike nweta ụdị ụdị dị iche iche nke ị ga-ahụ nke gị n'ezie. Ị nwere ọtụtụ ihe ịhọrọ! Anyị na-achọ imeziwanye onwe anyị kwa ụbọchị ma mepụta atụmatụ ọhụrụ. Nhazi nke na-aka mma mgbe niile, yana ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-arụkọ ọrụ na-enyere anyị aka ma na-ewetara anyị nso na ịdị mma.
ANY AD NA-EGO ND L:
Ibi ndu di ebube, anyi huru ihe niile nke Nature Nature na-enye anyi ma nye anyi ubochi niile nke ndu anyi. Iswa jupụtara na ebe dị ịtụnanya ị ga-enyocha ma nwee ọ .ụ.
N'ime ala anyị nwere otu ihe doro anya: anyị na-achụ adrenaline ka ọ dị ndụ. Iji mejupụta obi anyị wee chọpụta na enweghị oke. Anyị na-achụso ihe na-agaghị ekwe omume iji gosi na ọ bụ ihe dị iche, ebe anyị maara na ọtụtụ ga-akpọ anyị onye ara. Ma gịnị? Ihe ha na-amaghị bụ na ha na-agba ara. N'ihi na n'ezie onye ọ bụla nwere ụbọchị mgbe anyị na-ahọrọ ịghara iche ihu egwu. N'ezie, onye ọ bụla nwere ụbọchị nke anyị na-achọ ka anyị ghara iru oke nke ohere anyị, ma ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ịgbalị imeri onwe anyị ma ghara ịdaba n'egwu n'ihi na anyị kwenyere mgbe nile na ọ bụ ya. mma ịkwa ụta ya karịa ka ahapụ ya na ọchịchọ ịnwale.
Ya mere ee: n'ezie na anyị dị ntakịrị ara, ma ọ bụ na ọ dị anyị ka ọ dị ndụ.
Ndị ọrụ nkwado nke: